Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKristin
Eyakhelwe ngesandla, ikhaya "eliluhlaza" lijikelezwe ziintaba kunye nemithi kunye nemizuzu nje emithathu ukusuka ekungeneni okumangalisayo kweMinnewaska State Park, kunye "namachibi esibhakabhakeni" awondliwa entwasahlobo kunye neekhilomitha ezininzi zeendlela zokuhamba, ukukhwela ibhayisekile, kunye nokuwela ilizwe lokutyibilika ekhephini. ngexesha lonyaka.
I-Nest sisakhiwo se-rustic se-post-and-beam esine-super-insulated, i-15-intshi-engqindilili yeendonga ezenziwe ngeebhali zendiza. Zityatyekwe ngaphakathi nangaphandle ngoomaleko bomhlaba kunye nekalika kwaye zirhabaxa, inkangeleko enamaza kunye noburhabaxa. Ubumdaka bubonakala bunika isiseko, imvakalelo ethuthuzelayo kwindlu.
Ikhitshi kunye neebhafu zezangoku, kunye ne-quartz countertops kunye nezixhobo ezingenasici. Kukho iifestile ezinkulu kulo lonke.
Kumgangatho ongezantsi kukho igumbi lokuhlala elivulekileyo / lokutyela elinomgangatho weethayile kunye nesilingi yecathedral; ikhitshi; ibhafu enye epheleleyo; kunye negumbi elinye lokulala. Ikhitshi linezinto ezininzi zokupheka zaseCuisinart, iiglasi, izitya, izixhobo, umenzi we-espresso waseKeurig, kunye nokunye.
Igumbi lokulala elikhulu kunye nelinye igumbi lokuhlambela eligcweleyo likumgangatho ophezulu, kunye negumbi lokuhlala elongezelelweyo / idenariyo / indawo yokusebenza enesofa esimemayo kunye neTV kunye nembono yexesha lomqolo. Le yindawo entle yokucamngca ngomsebenzi woyilo okanye ukuphumla nje ngekomityi yekofu okanye iglasi yewayini kwaye uthethe nesibhakabhaka kunye nemithi.
Iiyunithi zotshintshiselwano ngobushushu ezonga amandla ngokuzolileyo zomoya-moya kunye nokunciphisa umswakama endlwini ehlotyeni. Kukho neefeni ezintathu zesilingi. Kwiinyanga ezibandayo, ubushushu buphuma phantsi.
I-Mohonk Gcina kunye ne-Gunks malunga nemizuzu eyi-10 kude. I-High Falls, i-New Paltz kunye ne-Gardiner nganye malunga nemizuzu engama-20, kwaye i-Woodstock (kunye nezinye iindawo ezininzi zokufunyanwa) ikude kancinane kodwa iseyindlela elula yokuqhuba. Ukongeza kubuhle bayo bendalo, i-Hudson Valley esembindini ineendawo zokutyela ezintle kakhulu, i-assortment yeendawo ezithengisa utywala, ii-cideries, kunye neegalari, iikonsathi, iithiyetha kunye neendawo zembali, ukuba uzimisele. Kwaye iMaverick Concerts, iBard SummerScape kunye nezinye iindawo ezininzi zivuliwe kwakhona kweli xesha lonyaka!
Sine-wifi ethembekileyo enesantya esiphezulu, iTV ephilayo kunye neNetflix endlwini. Uqhagamshelo lwefowuni lunokuba ngumzobo, kodwa ababoneleli beefowuni ze-intanethi basebenza kakuhle.
Akukho ntlawulo yongezelelweyo yokucoca. Amaphepha kunye neetawuli zihlanjululwa nge-hypo-allergenic detergent, ngaphandle kweedayi ezenziweyo, iziqhumiso, okanye izikhanyisi.
Nceda uzive ukhululekile ukubuza malunga nemihla enokuthi ivaliwe kwikhalenda. Ekubeni maxa wambi sizihlalela endlwini, sisenokuba bhetyebhetye.
I-Nest ayiyoshishini! Mna nosapho lwam siyalithanda eli khaya silakhileyo kwaye sichitha ixesha apha nanini na kunokwenzeka. Siyathemba ukuba uyakukonwabela ukubaleka kwilizwe lethu njengoko sisenza.
43" TV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Netflix, I-Amazon Prime Video
Le ndlu ikwingingqi encinci ngaphandle kwe-Route 44 55, kunye neehektare ezingama-30,000 zomhlaba okhuselweyo kanye kufutshane.
Art, architecture, music and language lover. I have worked in a range of fields (from the Estate of Igor Stravinsky to an acupuncture clinic in the South Bronx, a charitable trust in rural India, and an agency supporting immigrants' rights and literacy in Upper Manhattan) . I grew up in the Hudson Valley, roaming these trails and swimming in Lake Minnewaska and the mountain streams. Later I spent decades in NYC and years abroad, in Europe and India, but I have come to appreciate this area even more now that I am living here full-time again. I still love hiking and am a grateful member of Minnewaska Distance Swimmers Association! It is a pleasure to welcome guests to this home and to this area. I am always happy to be of help if I can!
Art, architecture, music and language lover. I have worked in a range of fields (from the Estate of Igor Stravinsky to an acupuncture clinic in the South Bronx, a charitable trust…
Kwiimeko ezininzi uKristin uya kudibana nawe endlwini kwaye aphendule nayiphi na imibuzo onokuba nayo. Njengoko ndihlala kufutshane, ndinokufumaneka lula ukuze ndincede ngayo nantoni na enokuvela. Ndiyayithanda le ndawo kwaye, njengekhaya elibuyiselwe ekhaya, ndiyayazi kakuhle.
Kwiimeko ezininzi uKristin uya kudibana nawe endlwini kwaye aphendule nayiphi na imibuzo onokuba nayo. Njengoko ndihlala kufutshane, ndinokufumaneka lula ukuze ndincede ngayo nanto…